Xukuumadda oo soo dhawaysay dacwada Cali samatar ee xusuuqii uu ka geystay Somaliland | FooreNews
Home wararka Xukuumadda oo soo dhawaysay dacwada Cali samatar ee xusuuqii uu ka geystay Somaliland
Xukuumadda oo soo dhawaysay dacwada Cali samatar ee xusuuqii uu ka geystay Somaliland
fooreFeb 22, 2012wararka0
Hargeysa (FOORE)-Xukuumadda Somaliland ayaa soo dhaweysay maxkamadeynta Madaxweyne Ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Cali Samatar oo dhawaan lagu maxkamad lagu soo taagayo dalka Maraykanka, ka dib markii muwaadiniin reer Somaliland ahi dacwad ku soo oogeen.
Wasiirka Kalluumaysiga iyo khayraadka Badda Md. Cabdilaahi Jaamac Cismaan Geel-jire ayaa wax lala yaabo ku tilmaamtay hadalkii ka soo yeedhay madaxweynaha dawlada TFG-da Somalia.
“Xukuumad iyo shacaba dadkeena ku nolol reer Somaliland wixii ka galay danbi ama aynu u sheeganayno danbi. Haddii loo helo maxkamad eegta kiiska taageero ayuu inaga mudan yihiin Sida aad ogtihiinbaa kiisan dad muwaadinin oo reer Somaliland ayaa soo dacwooday oo Cali Samatar ka soo dacwooday oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliya ahaana wasiirkii gaashandhiga,”Ayuu yidhi wasiirka Kalluumaysiga iyo kayraadka baddu Cabdillaahi Jaamac Cismaan (Geeljire)
Wasiirka wuxuu sidaasi ku sheegay waraysi uu maanta siiyay Telefishanka Horn Cable TV. Waxaanu yidhi “Isaguna waxaa uu berigaa warbaahinta u sheegay inuu ahaa ninkii amray in hargeysa diyaaruhu iyaga oo kacaya madaarkeen ay dadka shacabka duqeeyaan. Marka dadkii beriga wax ku noqday ayaa dacwada lahaa, markaa waanu taageersan nahay oo isaguna markaa wuu u baahanyahay caddaalad hadii lagu helo oo wuxuu helayaa danbigii lagu helay, haddii aan lagu lahayn oo ay maxkamadi sii dayso waxa uu helay caddaalad oo waxa weeye danbigaa waa lagu waayey oo anagu waanu taageersan nahay isaga iyo wixii la keeni karabaa.”
Sidoo kale wasiirka wasaaradda Kalluumaysiga iyo Kayraadka baddu , waxaa uu hadal lala yaabo ku tilmaamay hadalkii ka soo yeedhay Madaxweynaha dawladda kumeel-gaadhka ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif kaasoo sheegay in ka qaybgalka shirka London ee Somaliland ay muujinayso inay Somaliland ka soo dabacday halkeedii hore “Dee marka ugu horaysa waxaad garankarta marka uu madaxweynaha Soomaaliya uu warbaahinta la hadlayo oo Public ula hadlayo oo xilkiisa ayuu gudanayaa oo dadkii uu sheeganayay inuu xukumo ayuu waxa u sheegayaa.”
“Laakiin inaga maxaa ina khuseeya weeye? Waxa uu yidhaahdo hadu rajeeyo inay Soomaaliya isku soo noqoto, waa rajadiisa oo waa wax uu isagu niyadiisa ka doortay. Laakiin inaguna waxaynu rajaynaynaa oo aynu ficilkeena ku darnay in gooni-isu-taggeena iyo qarannimadeena ilaashno oo aynaan ku noqon midnimadda Soomaaliya oo aynu halka aynu joogno ictiraaf caalamiya ku helo oo inaguna waynu is ictiraafnay oo nina niyadiisa ku qabsan mayno oo niyadiisa isaga u xorra. Laakiin mid na khuseeya hadalkaasi maaha,”ayuu yidhi Wasiirku.
Previous PostDawladda Hoose ee Hargeysa oo banaysay Wadooyin xidhmay oo ku yaala degmada Axmed-dhagax Next Post“Shirka Tallo ayaa lagu tagay, Somaliland khibradeeda ayay u gudbinaysaa caalamka”